Flat Pack lishe laba ngumlotha Isitsha House Ngayo - China Qingdao Xinmao ZT Steel
Flat Pack lishe laba ngumlotha Isitsha House for Living
Foldable lishe laba ngumlotha Shipping Isitsha Homes nge Igumbi lokuhlala, Ikhishi, lokugeza
Wall futhi Roof Materils: Sandwich iphaneli
Sakhiwo: Khanyisa steel isakhiwo esitsheni endlini
Iwindi: Aluminium ingxubevange iwindi noma steel Plastic iwindi
Umnyango: Aluminium Uhlaka isangweji panel umnyango.
Usayizi: 20 izinyawo; 40 izinyawo
Inkokhelo elithi: 40% T / T, emyalweni futhi ibhalansi ikhokhwe ngaphambi kokubeletha.
Isikhathi Delivery: Phakathi ngenyanga eyodwa emva kokuthola wena yokukhokha egcwele.
Uphiko uvumelanise eside 3mm lashukumisa
uvumelanise okufutshane 2.5mm lashukumisa
ikholomu 3mm lashukumisa
udonga iphaneli 75mm EPS isangweji ibhodi
ophahleni panel 75mm PU isangweji ibhodi
uvumelanise Z emise lashukumisa lensimbi
ukwahlukanisa 75mm polyurethane
Floor iphaneli 18mm plywood iphaneli + 12mm laminated phansi noma
20mm usimende-fibre + PVC 2mm
umnyango Steel Ezokuphepha umnyango, 740mmx1950mm
ifasitela PVC esishelelayo iwindi nge yesivalo Rolling, 1100mmx800mm
amanzi ngokuvumelana nomthetho wendawo
Ifenisha Kwenziwe ngentando ezenziwe izidingo zakho
Technical sepharamitha Of Standard prefabricated House:
1. Umoya ukumelana: Grade 11 (umoya speed≤ 111.5km / h)
2. Ukumelana nokuzamazama komhlaba: Ibanga lesi-7
3. Umthamo wokulayisha ophilayo ophilayo: 0.5KN / m2
4. Udonga lokudlulisa ukushisa lwangaphandle nangaphakathi lwangaphakathi: 0.35Kcal / m2hc
5 Umthamo womthwalo wesitezi sesibili: 150kg / m2
6. Umthwalo obukhoma
Roof, Uhlaka phansi, ikholomu kanye odongeni panel yendlu esitsheni sindlaleke igcwele, kwehlisa umthamo zokuthutha, kalula ingafakwa kusayithi noma usetshenziselwe inguqulelo zokuthutha.
Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., LTD Inkampani ingenye inkampani ezimisiwe okwehlela ezikhethekile yokukhiqiza izindlu lishe laba ngumlotha ahlukahlukene kanye esitsheni izindlu nge izinga ezinhle futhi amanani abiza. Co-kwezimayini Shandong Qingyun Xinda Color Steel Sakhiwo Engineering Co., Ltd., okuyinto eyasungulwa ngonyaka ka-2003 angaphezulu kuka-50-R & D abasebenzi abasebenzi abangaphezu kuka-400 asisekele ukuthola isabelo esikhulu emakethe. Inkampani yethu zobuchwepheshe ibhizinisi ukukhiqizwa abanemigomo oluphelele ekukhiqizeni steel isakhiwo nokufakwa, inkampani uthole isitifiketi izinga international ISO9001 kanye Steel Sakhiwo Ukwakhiwa Ukufaneleka Certificate Ibanga II.
Thina kuqukethe emisebenzini yokwakha ekhaya aphesheya, yokuthengisa yethu nomthamo emakethe Philippine kuyinto No.1, singabantwana the best futhi umphakeli enokwethenjelwa kakhulu kule ndawo, futhi thina abaphezulu 3 umphakeli ePakistan futhi Sudan.There namanje kukhona amaphrojekthi e Dubai, Oman, Uzbekistan nakwamanye amazwe. Angaphezu kuka 80% imikhiqizo yethu kukhona ukuthekelisa jikelele, anjenge-Australia, eningizimu Melika, eYurophu, eMelika, eNingizimu Afrika, eNyakatho ye-Afrika, e-Asia, Middle East, nakwamanye amazwe kanye izifunda
Siyakwamukela ukuvakashela factory sethu ngqo.
* Isakhiwo uhlelo kungenziwa yakhelwe uma kudingeka.
* Ukufakwa isingeniso / CD / ukufakwa umdwebo zizonikezwa uma kudingeka.
* Engineers and abasebenzi ingathunyelwa phesheya isiqondiso futhi ukufakwa.
* Onjiniyela Professional Consultancy kanye nemibuzo.
Inkampani yokuncintisana onqenqemeni
1) Ukufaneleka: CE (DIN18800), ISO9001, BV, SGS;
2) Long isikhathi oversea iphrojekthi nakho;
3) Ukwakhiwa High Efficiency (2 isisebenzi ngosuku olulodwa ngenxa eyodwa);
4) 4S yokuthengisa isevisi yenethiwekhi, athenge indlu uthanda ukuze nje athenge imoto;
5) Nhlobo ngezifiso: Singenza phezu ububanzi esitsheni endlini, efana 10feet, 12feet, even14feet ububanzi.
6) umkhiqizo Big: amayunithi ezingaphezu kuka-50 zingaba nsuku zonke, ukuze sikwazi unciphise isikhathi lead to meet you izidingo
Okulandelayo: One of Hottest for Container Home Quotes - Prefabricated Steel Workshop Building Warehouse Steel Structure Design and Manufacture – Xinmao ZT Steel Construction Co., Ltd.
Izinzuzo Of Steel Sakhiwo Isakhiwo
Isakhiwo Made Steel Sakhiwo
Isakhiwo Bezakhiwe Steel Image
Famous Steel Sakhiwo Isakhiwo
Steel Okokuqala Sakhiwo Isakhiwo
Indlela Bala Steel Sakhiwo Isakhiwo
How To Make Steel Sakhiwo Isakhiwo
Khanyisa Steel Sakhiwo Isakhiwo
Steel Esilula Sakhiwo Isakhiwo
Indlela Isitatimende Ukuze Steel Sakhiwo Isakhiwo
Steel Isakhiwo & Sakhiwo Co. Ltd
Steel Ukwakheka & Metal Isakhiwo Magazine
Steel Sakhiwo Isakhiwo EChina
Steel Sakhiwo Isakhiwo Ngo Dubai
Steel Sakhiwo Isakhiwo EKerala
Steel Sakhiwo Isakhiwo Ngo Malaysia
Steel Sakhiwo Isakhiwo ENepal
Steel Sakhiwo Isakhiwo Malaysia
Steel Sakhiwo Isakhiwo Abakhiqizi
Steel Sakhiwo zokwakha
Steel Sakhiwo Isakhiwo Uhlelo
Steel Sakhiwo Rise High Isakhiwo
Steel Sakhiwo Ngo Isakhiwo
Steel Sakhiwo Ibhilidi
Steel Sakhiwo Of Empire State Building
Imfashini Design Shipping Isitsha House wit ...
High Quality lishe laba ngumlotha Steel Shipping Isitsha Ho ...
Okuhle Yakhelwe Ucingo Isitsha House Isitolo nge ...
Hlanganani ezithathekayo 20FT Isitsha Indlu Resor ...
Lishe laba ngumlotha Isitsha Indlu International Certi ...
Single uMnyango Cabins Kushintshwe Ukuthumela Qhubek ...